Wax Badan Akhri Wax Badan Ogow .. Saynis-Yahano Ogaaday Sababaha Keena Cirrada Iyo Waxa Lagu Daaweyn-karo
Seeynis-yahano ayaa sheegay in laga yaabo in ay heleen in wal-bahaarka ama wal-walka uu timaha ka dhigo kuwa Cad ama Cirro ah .. Waxaa kale oo ay ogaadeen sida looga hortagi karo cirrada iyada oo aanan la isticmaalin madoobayso.
Tijaabooyin lagu sameeyay jiir (dooli) ayaa lagu ogaaday natiijooyinkan .. Mid ka mid ah Jiirarka oo dhogortiisa ay madoobayd ayaa xanuun la marsiiyay, taas oo ku dhalisay welwel badan, dhogortiisana waxa ay ku caddaatay muddo todobaadyo gudahood ah.
Cilmi-baarayaasha oo ka kala yimid Maraykanka iyo Brazil ayaa sheegay in tan ay horseedday in la raadiyo daawo dadka ka caawin karta in aysan timahooda cirroobin, xitaa haddii ay weynaadaan.
Dumarka iyo Ragga ayay cirrada ku bilaabataa bartamaha sanadaha Sodomeeyada marka ay marayaan, gaar ahaan marka ay waalidiin noqdaan.
Inkasta oo cirrada inta badan ay ka dhalato qofka oo ay da’diisa sii weynaato, ayaa haddane waxaa la ogaaday in welwelka iyo walbahaarka uu horseedo.
Waxa ay seeynis-yahanadan oo ka kala tirsan jaamacadaha Sao Paulo iyo Harvard ay sheegeen in cirrada ay ka dhalato unugyo jirka ah oo siidaada maaddo lagu magacaabo melanin, taas oo bedesha midabka tinta.
“Waxaan ognahay hubanti ahaan in welwelka uu mas’uul ka yahay in tinta midabkeeda uu is bedelo” ayuu yiri Prof Ya-Cieh Hsu oo ka tirsan jaamacadda Harvard.
Cilmi baarayaasha ayaa dooli kale siiyay dawooyinka welwelka dajiya, islamarkaasna ka hor taga in uu dhiigga kaco, kadibna waxaa dhacday in markii la mariyay isla xanuunkii dooligii hore oo kale aysan is badelin midabka dhogortiisa.
Balse waxa ay sheegeen in aysan weli dawo u helin cirrada, balse ay tahay arrin biloow u ah in la raadiyo dawada cinrada